Farxiya fiska iyo farxiya kabayare oo isku bahaystay shoowga holand dhulkana ku jiiday fartuun cumar - iftineducation.com
iftineducation.com – Fanaanada caanka ah ee Farxiya Fiska ayaa soo gaartay magaalada Amsterdam ee dalka Holland, iyaddoona u socota ka qeybgalka SHOWGA ay 26-12-2014 ay Rotterdam ku qabaneyso fanaanada kale ee Farxiya Kabayare.
Dadweyne ugu jira taageerayaasha fanaaniinta Kabayare iyo Fiska ayaa waxaa ay uga hortageen garoonka Amsterdam, halkaasi oo lagu gudoon siiyey ubaxyo ay ku muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin imaanshaheed Holland.
” Waan ku faraxsanahay inaad caawan Fiska ina soo gaarto, iyaddoo ay dadka xiiso badan u qabaan fankaaga” ayuu yiri Xuseen khadhiib oo ah madaxda sare ee SOMNEWS TV, sidoo kalana ah ganacsade Soomaaliyeed oo Holland ku nool.
Sidoo kale fanaanada Farxiya Kabayare oo ka mid aheyd dadkii soo dhaweeyey Farxiya Fiska ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay markii ugu horeysay oo ay kulmayaan iyada iyo Fiska, islamarkaana ay kala qeybgaleyso bandhig faneedkeeda.
“Walaasheey Farxiya Fiska aad ayey ii farxadgelisay imaanshahaaga, waxaana ay ii tahay habeen igu weyn, oo farxad u ah taageerayaasheena dhamaan. Reer Hollandna waxaan leeyahay 26-12-2014 ha moogaanina showga aniga iyo Fiska aan idiin wadno” ayey tiri Fanaanada Farxiya Kabayare oo la hadleysay warbaahinta
Hal-abuurada kala ah Jawaahir Shire Ahmed iyo Abuukar Ali Nuur ayaa dhankooda hadalo ammaan iyo soo dhaweyn u badan ka jeediyey imaanshaha Farxiya Fiska, waxaana ay sheegeen inay reer Holland u diyaar u yihiin ka qeybgalka showga 26-bishan ee Rotterdam.
Fanaaniintan caanka ah ee Farxiya Fiska iyo Farxiya Kabayare ayaa waxaa ay ka mid yihiin kuwa loogu jecel yahay fanka Soomaaliyeed dhanka hablaha. Waxaana baryahan wadanka Holland laga hadal hayey showga ay wadajir ka u qabanayaan.
Daawo fanaanad cusub oo 7sano jir ah Waa Ubax cawaale aadan curadii fanaankeena official video